बिचौलियाको कब्जामा मेगा बैंक, हिरासतमा रहेका ग्राहकको हस्ताक्षरमा करोडौं साफ - सुसूचित नेपालको चित्र: Onlinepana
बिचौलियाको कब्जामा मेगा बैंक, हिरासतमा रहेका ग्राहकको हस्ताक्षरमा करोडौं साफ
शनिवार, कार्तिक २२ २०७७
भारतमा एउटा बैंकिङ घोटाला काण्ड चर्चित छ । आइसिआइसिआइ बैंकको सिइओ तथा एमडी रहेकी चन्दा कोचरले आफ्ना पति दीपक कोचरसँगको मिलेमतोमा वेणुगोपाल धुत अध्यक्ष रहेको भिडियोकोन ग्रुपलाई ३२५० करोड भारु ऋण दिँदा घोटाला गरेको पत्ता लागेपछि उनले राजिनामा दिएर पनि सुख पाईनन् । उनी बर्खास्तीमा परेको बदनामीले पनि पुगेन । कोचरले सन् २००९ देखि २०१८ सम्म लिएको बोनस समेत ब्याज सहित तिर्नु परेको दृष्टान्त सबैसामू छर्लङ्ग छ ।
भारतको चन्दा कोचर र दीपक कोचरको बदमासी सेलाउँन नपाउँदै नेपालमा पनि झन्नै त्यस्तै प्रकारको बैंकिङ बदमासी बाहिरिएको छ । भोज बहादुर शाह अध्यक्ष तथा अनुपमा खुन्जेली प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेको मेगा बैंक नेपालमा भएको बदमासी बाहिरिएको हो ।
मेगा बैंकसँग जोडिएका बदमासीका धेरै फेहरिस्त अनलाइनपानाले फेला पारेको छ । तर हामी एउटा प्रसंगमा कुरा गरौं ।
समान्य तह कुनै पनि घरजग्गा कुनै व्यक्तिले आफ्नो नाममा ल्यायो भने ६ महिनासम्म त्यो घरजग्गा धितो राख्न नपाईंने नियम छ । छ महिनापछि पनि कसैको दाबी विरोध आउँला भनेर थप ३५ दिनसम्म कुर्नु पर्ने हुन्छ । यसो गर्दा आफूले किनेको घर जग्गा ७ महिना ५ दिनसम्म बैंकमा धितो राख्न पाईंदैन ।
बैंकहरुको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको मापदण्ड बिपरीत मेगा बैंकले कारोबार गर्ने गरेको तथ्य फेला परेको छ । मकवानपुर जिल्लाको साविक बसामडी ५ तथा हालको हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ मा सिताराम बर्तौलाको घर जग्गा छ । उक्त घर जग्गा भएको ठाउँमा २०७५ को अन्तिम तिर भूमादेवी गौतम (पौडेल) र उनका पति गुरुदत्त पौडेल पुग्छन् ।
बर्तौलाको जग्गा हत्याउँन पाए गतिलै रकम हात पार्ने मनसाय बोकेका पौडेल दम्पत्तीले उक्त घर जग्गा किन्ने मनसाय राखेर कुरा अगाडि बढाउँछन् । अन्तत: उक्त जग्गा बेच्न बर्तौला राजि हुन्छन् र २०७५ चैत्र २९ गतेका दिन त्यो जग्गा बिक्री हुन्छ । त्यहाँसम्म कुरा गडबडी भएको बर्तौला परिवारलाई थाहा हुदैन ।
सिताराम बर्तौलालाई भुक्तानीको लागी भनेर चेक हस्तान्तरण गर्छन् । भूमादेवीको नाममा दर्ता भएका बखत जग्गाको मुल्य रु. ४३ लाख १४ हजार ८८६ मुल्याँकन भएको हुन्छ । उक्त जग्गा आफूहरुको बनाएपछि पौडेल दम्पत्ति मेगा बैंकमा पुग्छन् ।
पहिले पनि बारंबार बैंकिङ कारोबार गरेका उनीहरुले बैंकका हाकिमहरुलाई रिझाउँनु पर्ने आवश्यकता नै भएन । पहिले जे बानी लागेको थियो त्यही अनुसार हुने नै भयो । बैंकमा सामान्य प्रकृया सुरु गर्दै जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंक वा अन्य आर्थिक नियमहरुको पालना गर्नु आवश्यकता ठानिदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंककै नीति निर्देशनको अधिनमा रही जनताले दुख गरेर कमाएर बचत गरेको रकमको सुरक्षा गर्न स्थापित मेगा बैंकले कानूनी प्रक्रियाहरुको पालना गर्नु उपयुक्त ठान्दैन । भूमादेवीको नाममा पास भएको जम्मा ३७ दिनमा जग्गा धितो राखेर बैंकले उनलाई ऋण दिन्छ ।
यो जग्गाको मुल्य ४४ लाख पनि छैन । तर बैंकले भने गौतमलाई १ करोड ३५ लाख ऋण दिएर जनताको पसिनाले कमाएको सम्पत्तिको दोहन गरेको छ ।
खराब नियत भएका बिचौलिया भूमादेवी गौतम र गुरुदत्त पौडेलको ठगीमा मतियार बनेको यस बैकमा धितो राखिएको कित्ता नं. १२७३ रहेको यो जग्गा सितारामले भूमादेवीको नाममा पास त गर्दिन्छन् तर चेक साटेर रकम निकाल्न पाएका हुँदैनन् । त्यसपछि बर्तौलाले आफू ठगिएको महसुस गरेपछि २०७६ कार्तिक २८ मा लिखत बदरको माग गर्दै मुद्धा दायर गर्छन् । उक्त मुद्धा हाल बिचाराधिन अवस्थामा रहेको बताईन्छ ।
यस सम्बन्धमा बिचौलियाको अभियोग लागेकी भूमादेवी गौतमसँग बुझ्न खोज्दा उनको मोबाईल उनका पति गुरुदत्तले उठाए । निकै नै च्याठिएर बोलेका उनले आफ्नो व्यक्तिगत व्यवहारको बारेमा सोधेर प्रेसर नदिन चेतावनी दिए । मेगा बैंकबाट नै पीडित बनेका उत्तम कुमारको नाम लिदै उक्त व्यक्ति फटाहा भएको र आफूलाई नानाथरी कुरामा दुख दिई रहेको आरोप लगाए ।
आर्थिक तथा बैंकिङ मापदण्ड बिपरित ऋण प्रवाह गरेको सम्बन्धमा बैंकका प्रवक्ता तुलसीराम पोखरेलसँग प्रतिक्रिया माग्दा आफूले फाईल हेरेर मात्र भन्न सक्ने तर फाईल कता कता भएकोले तत्काल भन्न नसक्ने भन्दै पन्छिए ।
४३ लाख करीब मात्र मुल्याँकन भएको सम्पत्ति डेढ महिना पनि नपुग्दै त्यति धेरै ऋण कसरी दिनु भयो भनी बैककी सिइओ खुन्जेलीसँग प्रतिक्रिया माग्दा उनले घुमाउरो तरिकाले उक्त कुरा स्विकार गरेकी छिन् । जग्गा किन्दा वा बेच्दा जति मुल्य भएपनि आफ्नो बैंकको मुल्याँकनकर्ताको सिफारिसको आधारमा बैंकले कर्जा दिने गरेको उनको तर्क रहेको छ ।
आफूले एक टेलिभिजनमा बोली सकेकोले घरी घरी बोल्न आवश्यक नरहेको बताएकी सिइओ खुन्जेलीले जग्गा किनेको समयावधिको बारेमा प्रतिक्रिया माग्दा ऋण लिन आउँनेहरुले आफूलाई झुक्याएको हुनसक्ने भन्दै निर्लज्ज जवाफ दिईन् ।
त्यसै गरी बैंकले प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा हिराशतमा रहेका ग्राहकको हस्ताक्षरमा एकै दिन करोडौंको कारोबार गरेको रहस्य समेत बाहिर आएको छ ।
जनताले खाई नखाई दुख गरेर जोगाएको पैसा सुरक्षित होला भनेर बैंकमा राख्दा कसरी दोहन हुँदो रहेछ भन्ने यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । यस बैंकका काण्डहरु धेरै छन् । ती काण्डहरुको हामी एक/एक फाईल खोल्दै जानेछौं ।
यसै बैंकको मिलेमतोमा पौडेल दम्पत्तीले सडकमा ल्याएका उत्तम कुमारको भिडियो हेर्न लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् :
# मेगा बैंक नेपाल # भोज बहादुर शाह # अनुपमा खुन्जेली # भूमादेवी गौतम (पौडेल) # गुरुदत्त पौडेल
शनिवार, कार्तिक २२ २०७७०६:२७:४४